अद्भत प्रतिभा सुजल बम : न बोल्न सक्छिन्, न त सुन्न तर उपाधि होडमा - अहिल्यै भाेट गराैँ सियर गराैँ
खानेपानी र सरसफाइको आठौं साधारणसभा
गायक/गायिका जोजिजूको जोडीद्वारा रेकर्डिङ स्टुडियो सञ्चालन
आजको राशिफल र शुभ साहित हेर्नुहोस
पब्लिक स्कुलको 'ने चुर ल डे थ'
विश्व साहित्य : शेरको बेकसकाे कविता - कपडा
Narendra Modi thanks voters for 'historic mandate'
राशिफल:आज शुक्रबार सन्ताेषीमाताकाे पूजा आरधना गराैँ भाग्यफल प्राप्त गराैँ
मोदीकाे जितपछि पहिलाे सम्बाेधन के भने
आइएमई लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा एक लाखको शैक्षिक सामग्री वितरण
बैशाख २६, २०७६ सारङ्गी न्यूज
काठमाडौं । अद्भत प्रतिभा सुजल बम ‘मिस्टर एण्ड मिस एसईई २०१९’ उपाधि होडमा छिन् । राजधानीमा जारी प्रतियोगितामा सुजल बम एक यस्ता प्रतियोगी हुन् जसले न कान सुन्छिन न त बाेल्नै सक्छिन् ।
फेसन ईरा काठमाडौंद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा देशभरीबाट ८९ जना प्रतिस्पर्धीहरुले सहभागी भएका छन् । सहभागीेमध्ये ८८ जना सबै सपाङ्ग छन् भने सुजल मात्र अपाङ्गता भएकी प्रतियोगि हुन् । उनी कान सुन्दिनन् भने बोल्न पनि सक्दिनन् ।
सुदुरपश्चिमको डोटी जिल्लामा स्थायी घर भई हाल काठमाडौंमा बस्दै आएकी सुजलले केन्द्रीय बहिरा माबि नक्सालबाट एसईई दिएकी हुन् । विद्यालयमा हुने अतरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी भइरहने सुजल कान नसुने पनि राम्रो नाच्छिन् ।
भविष्यमा डान्स र मोडलिङको क्षेत्रमा आफुलाई स्थापित गर्दै अपाङ्गहरुका क्षेत्रमा काम सुजलको योजना छ । उनी भन्छिन्, ‘म जस्तै थुप्रै अपाङ्गहरूले अवसर पनि नपाउने र सहयोग पनि नपाउँदा उनीहरु आफुलाई कमजोर महसुस गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता ब्यक्तिहरूका लागि म प्रेरणाको श्रोत बन्न सकुँ ।’
विशेष क्षमता भएकाहरूले पनि सबैको साथ, सहयोग र अवसर पाएमा सवलाङ्गले झैँ काम गर्न सक्ने सुजलको बुझाई छ । विशेष क्षमता भएका मानिसहरुले केही गर्न सक्दैनन् र उनीहरुमा सपाङ्गझैँ आत्मबल हुँदैन भन्नेहरुको लागि सुजलको यो आँटले गतिलो झापड हानेको छ ।
सुजलले भोटका लागि सबैसँग अपिल गरेकी छन् । भोटका लागि अपिल गर्दै उनले भनिन् मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर fsee(space)1 टाईप गरी 33001 मा पठाएर म जस्तै फरक क्षमता भएकाको हौसला बढाइदिनुहोस् । भोट जुनसुकै कम्पनीको मोबाइलबाट गर्न सकिनेछ । भोट गर्ने अन्तिम मिति २०७६ जेष्ठ ५ गते राति १२ः०० बजेसम्म रहेको छ ।
फेसन ईराका अनुसार अनलाइनबाट समेत भोट गर्न सकिने छ । त्यसका लागि Digipay एप डाउनलोड गरी एक पटकमा बढिमा १०० वटा भोटसम्म गर्न सकिन्छ र दिनमा धेरै पटक सम्म भोट गर्न सकिन्छ । यसको फाईनल जेष्ठ ६ गते दिउँसो १ बजे प्रज्ञाप्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौंमा हुनेछ ।
बिहिवार, बैशाख २६, २०७६, ०४:०५:००
आज बिहिबार कुन राशिका लागि फलदायी ? कसरी कटाउने ग्रहदशा ?
आजकाे तपाईकाे राशिफल हेर्नुहाेस्
बुधबार कुन राशिका मानिसले के गर्दा राम्रो ? यस्ता छन् विधि
जेठ ८, २०७६ सारङ्गी न्यूज
रसिलाे यौन, कसिलाे सम्बन्ध
जेठ ७, २०७६ सारङ्गी न्यूज
खानेपानी र सरसफाइको आठौं साधारणसभा जेठ ११, २०७६
खानेपानी र सरसफाइको आठौं साधारणसभा सारङ्गी न्यूज
कास्कीमा भारी लागू औषध सहित ७ पक्राउ सारङ्गी न्यूज
म्याग्दीमा १५ बर्षिया बालिकालाई मदिरा सेवन गराई सामुहिक बलात्कार, तीन जना पक्राउ सारङ्गी न्यूज
निर्मला पन्तकाे मुल्य १८ लाख हाे सरकार ? जेठ ९, २०७६
यस्ताे छ नेकपाका दुई भीआइपी 'सुकुम्वासी'काे भित्री कथा जेठ ८, २०७६
विप्लव माओवादी र प्रहरीकाे दाेहाेराे भिडन्तमा एक मा‌‌‌‌‌ओवादीकाे मृत्यु ! जेठ ८, २०७६
लैंगिक विभेदकाे पराकाष्ठ बैशाख २६, २०७६
मजदुर दिवसः‘मालिक’हरु सडकमा, श्रमिकहरु नालीमा बैशाख १८, २०७६
महिला बिनानै किन सुहायो नेकपालाई त्यो मञ्च ? बैशाख १०, २०७६
Sarangi News Network
प्रकाशक सरु जलन
संचालक / सम्पादक प्रकाश अधिकारी
प्रमुख संवाददाता लक्ष्मी सुनार
वरिष्ठ संवाददाता राजन उपाध्याय नवराज पहाडी भेषराज पौडेल अनुराग अधिकारी
व्यवस्थापक सुरज गुरुङ सुरज उपाध्याय
संवाददाता बिन्दु चन्द मनु विद्राेही सजिना मोक्तान
स्तम्भकार जनक कार्की रमेशचन्द्र घिमिरे